“Digital Certificate” & “COVID-19” - Land Of Punt
Digital Certificate, waa nadaam cusub oo ay alifeen shirkado gaar loo leeyahay wuxuuna badalayaa nidaamka looyaqaan “ID Card” ee dunida laga isticmaalo. Waxa uu noqondoona kayd ka duwan kuwii hore; wixii macluumad shakhsi ah sida sanadka aad dhalatay, goobta iyo wadanka aad ku dhalayba waa la kaydinaya. Dhereer kaaga iyo qaab dhismeedka jidhkaaga mid guudka sare ah iyo unugyada jidhka hoose waa lakaydinaya.
Arinka “digital certificate” wuxuu dabasocdaa mawduuca ah in biniadamka layareeyo waxaana bilaabay Thomas Malthaus (1766-1834) oo daraasad uu sameeyey kalasoo dhexbaxay in tirada dadka iyo cunada dunidu ay kala badanyihiin. Asagoo ka cabsiqaba inay kala badnaan doonan biniadamka dunida kusoo kordhaya iyo cuntada kasoo baxda beeraha, warshadaha waxsoosarka iwm in khatari ku imandoonto jiritaanka biniadamka. Cida aan dhul fiican haysan ee aan meel stratijiga (e.x. qoraxda) haysan waayo? Malthaus wuxuu fahamsanaa hadii arinkaasu yimaado ama dunida sadexaad awood yeelato cida ku qadaysa meesha ee loo baqaa inay yihiin wadamada barafkaleh ee uu kasoo jeedo. Isla wakhtigaa dunida uu kasoo jeedo Malthaus waxa kajirtay macaluul “famine” oo loogu dhimanayey waqooyiga Yurub waxayna u haajireen wadamo kale.
Wixii kadanbeeyey wakhtigaa uu Malthaus soo jeediyey waa in wax laga qabta arinkaa mawduca ah in tiro yarayn dunida lagu sameeyo marba marxalad ayuu kasoo baxayey. 1970gii ayaay ahayd markii madaxweynihii USA Jimmy Carter oo horjooge u ahaa kulankii lagu lafagurayey caqabadaha (cunto la’aanta) aduunka ka taagan waxaana agendaha ugu muhiimsanayn sidii loo xakamayn lahaa tirada biniadamka. Qoraal kasoo baxay shirkaa “Global 2000 report” lagu sheegay in wax kasta oo culays aduunka kukeenay ay sababta teeda leeyihin tirada biniadam ee dunida kusoo kordhaya oo ay kow kayihiin dunida sadexaad siiba Afrika.
Waxay la goloyimadeen hindisaha ah in dadka layareeyo oo loogu magacdaray mashruuca yaraynta dhalmada “population control”. Hindisahan waxa kamid ah in qoysku aanu dhafinkarin wax ka badan 2 caruura oo dhamaan ka hirgashay wadamada horumaray. Qorsheyaashan dadka lagu yaraynayo waxaa kamid ah in dagaalo joogto ah dunida laga huriyo, waxaa kaloo kamid ah in la dhiiri galiyo guurka raga isguursada iyo dumar oo iyana dhinacooda isguursanaya oo looga goleeyahay yaraynta dhalmada.Waxaa kaloo iyana la qorsheeyey in arinka dhinackalena laga wado oo sidadban dadkuna fahmin hoos lagu dhigo tirada dadka. Waxaa awooda lasaaray in qoyska lagu dhiirigaliyo inay dawooyin iyo waxyabokale oo lamid ah ay isticmaalan, in bulshada dunida sadexaad wacyigalin balaadhan laga dhex sameeyo oo lagu wacyi geliyo kala kor-siinta caruurta iyo mawduucyo la halmaala. Dumarkii oo lashaqo galiyey iwm. Waxaa kujirta in ilmahu aanuba dunida soogadhin ee uurka lagu dilo oo lasooturo “Abortion”. Waxay kaloo qorsheen in cuduro dunida lagu faafiyo noocudonoba ha ahaade oo dadka sidaana lagu laayo. Wixii dhalanaya iyo wixii dhimanaya waa inuu qorshe cad kayaalo. Arinka ugu weyn qorsheyaasha lagu yaraynayo biniadamka waxaa kow ka ah oo ugu khatarsan “Vaccination Program”.
Waxaa xigay oo saaxada saxaafada lagu dhex arkay Bill Gates maalqabeenkii “Microsoft” oo udiga rogtay rasuul fariin weyn sida oo dunida sadexaad badbaadinaya. Wakhtiyadii danbe sidii uu ugu dhawaaqay hayada Bill & Melinda Foundation wuxuu wakhti badan galiyey sidii uu u hirgalin lahaa inay Afrika hesho fursad ay dadkeeda ku talaalsho. Wax ugu jiro mooji!
Bill Gates wuxuu kamid yahay raga dunida ugu saamaynta badan wakhtigan aynu joogno oo arinkasta uu wato ama layimado laqaadanayo. Waa ninka la shirymi in saxaradiisa lacabo ee sacabka loogaracayey! Sanadadii inasoo dhaafay Bill Gates wuxuu u ololaynayey talaalka “Vaccination” lagu cidhibtirayo xanuuno badan sida dabaysha “Polio”, Ebola, Swine flu iwm.
Wuxuu inbadan kasii digayey balaayo aan muuqan oo lahaa waxaa soo socda cudur inagu faafidona oo dunida malaayin qof ku dilidoona. Waxaad mooda inuu dunida usii diyaarinayey inay soo wadaan cudurad faafa oo halis idingalin doona “Pandemic” xalkiina hayo. Bill Gates markasta wuxuu carabka ku dhufanayey sida uu Afrika usaamayndoono hadii aan talaal degdeg ah lagu samayn oo Afrika is talaalin. Hore ayuu ugu guulaystay inuu lacag inooga dhigo lambaro (e.x. ZAAD) oo inugu fushay qorshii koobad ee dhaqaalaha khuseeyey.
Wuxuu dhaqaale badan ku bixiyey (2.5 billion doolar) ka hortaga cudurkan soo socda ee faafaya iyo shaybaadhyo casriya oo dunida ka diiwan gashan. Bill Gates wuxuu kamid yahay dadka aminsan falsafada Thomas Mathaus ee ina odhanaysa in cuntada dunida iyo dadku kala badnaan doonan mana qarsadoba, markaa inuu sii dabargoynayo dunida sadexaad oo talaal iyo 5G kusii kharajinayo. Fekirkan uu aminsanyahay ee Mathaus inuu kamid yahay dadka aminsan xalka kaliya ee lagu badbaadinkaro biniadamka yahay “Popolation Control”.
Dhawaan ayey ahayd markii uu fagaare islasoo taagay waxaynu samaynaynaa “Digital Certificate” si loo ogaado dadka talaalka lagu sameeyey ee laga muday cudurada sida qarsoon ku faafa iyo cida aan talaalayn. Wuxuu Bill Gates carabka ku dhuftay inay fursad weyni kujirto COVIG -19 oo lasamayn doono talaal Khasab ah oo lagu kala ogaan doono cida ka talaalan COVIG-19 iyo cida qabta caabuqa ee khatarta ku ah inta talaalan. Qorshahan talaal socodsiinta ah wuxuu hoos imanaya qorshayaal farabadan oo jawi hoose iyo mid muuqdaba kusocda, waxaa kamid ah qorshan dhawaan soo shaac baxay ee digital indentification system ID2020 oo qaramada midoobay tuurta ku sidato.
Bishi tobnaad – 2019 intaanu qaraxin COVID-19 ayaay shir qaban qaabisay hayada Bill and Melinda Gates Foundation oo gacansaar laleh “World Economic Forum” iyo “The Johns Hopkins Center for Health Security” waxaana loogu magac daray “Event 201”. Waxaynu ogsoonahay in isla kulankaas lagu lafo guray “Novel Coronovirus” layskuna weydiiyey hadii caabuq dunida ku yimaado maxaa inooga qorshe ah. Shirkaa dibadii ayuu isla ayuu COVID-19 dunida ka qarxay sided usbuuc kadib Bal adba.!
Bishii sadexaad 18kii markale iyo Bill Gates (Ask Me Anything) mar uu sualo iyo jawaab isugu jiray laga waydinayey COVID-19 saamaynta uu dunida ku yeelandono , amuuruhu sidii hore dunida ahaan maayan ayuu ku bilaabay. Wuxuu yidhi wax kasta waxaa laga dhigi doono dijital/elektronig hadii ay tahay ganacsi, lacagtii xaashida ahayd (korona ayey sidaa) waa in loobedalo lambaro suuqana laga saaro, wuxuu sheegay in dukaanadu isuwada badalidoonan “cashless” kaadhadh iyo elektronig oo inaga caawindoonta ladagaalanka COVIG-19.
Isagoo dabasocda xakamaynta COVIG-19 waa in lasmeeya “digital certificate” siloo ogaado cida xanuunka qabta iyo cida laga talaalay ee suuqa lagu siidaynkaro. Si laysula jaanqado waa in lahelaa nidaam dad badan ka badbaadin kara COVIG-19. Waxaan lagu gaadhikaraa sofwareka elektoniga ah iyo internet xawaare dheereya sida 5G iyo optical fibre Cable ayuu yidhi Bill Gates.
Qorshahan “digital certificate” wuxuu suurgalinaya in lahelikaro ama lahayo macluumadka caafimadkaga sida intajeer ee lagu talaalay iyo xanuunada lagaa talaalay oodhan. Waxaa dabataagan qorshahan ururka “ID2020” oo kasocota qaramada midoobay, Rockefeller Foundation iyo ma cidkale Bill Gates “Microsoft”.
ID2020 waa qorshe lasoo mariyey UN oo loogu talogalay arimo kala duwan in lagu qabto oo nadaam isku xidhaya oo elektronig ah dunida loo sameeyo “digital identification system” oo xog shirkadaha, dawlada iyo ta shakhsiba lagu ururinayo. Waa qorshe balaadhan oo aan UN uun ku eekayn lakiinse dawladaha dunida ka taliya ay helikaraan. Waxyabaha uu fududayn doono ID2020 waxaa kamid ah in lagu xakameeyo isusocodka bulshada siiba qaxoontiga yurub ku yaacaya ee dunida 1aad iskasoo gelaya. Waxuu kaloo ID2020 hoos udhigidoona danbiyada dunida laga geysto oo cidkasta danbi gasha markiiba afarta lambar ee uu xambaarsanyahay ayaa lagu ogaanaya dhaqdhaqa iyo meelkasta uu tegay dambiiluhu. Waxay kudoodayaan in nadaamka “digital identification” amniga iyo xasiloonida dunida wax badan ka taridoono.
Mushruucan “ID2020” oo siweyn looga soo shaqeeyey lana soo mariyey qaramada midoobay waxaa laysla gartay inaan nadaamkii hore ee aynu u isticmaalijirnay “ID CARD” inaga saarayn dunida isasoo wadagaadhay, si markaa hadaf kooda uqarsoon ay ugaadhan waa in mashruuca laga dhigo TALAAL. ID cardkii aynu jeebka ku sidanay ee markaynu doono guriga kaga imanaynay loo badalo jibyar oo lagugu rakibo oo gacanta lagu tolo, aalada yar ee kugu jirta ayaa ayaa lagala soconaya hadii aad muadin wacan tahay iyo hadii aad nadamkooda kasoo horjeedid, hadii ladoono in bartaa lagugu talaagadeeyo la fulinaya. Aalada ku jirta ayaa xogtaada qaabilsan oo hadii loo baahdo bartaa laga helayaa adigoo aan waxba lagu weydiin amase aanadba ogayn.
Cidii talaalka iyo jibkaayari kujiro ayaa loo aqoonsanayaa inay bulshada/bulsho meel ku wadanool ka tirsan oo wax iibsankarta oo diyaarad raacikarta, oo dhakhtarka tagikarta oo dunida u tirsan. Waxay ugu talogaleen in dunida lagu khasbo oo ama COVIG-19 halagu soo dhuunto oo cabsi halagu ogolaansiyo ama dawlad Khasab ha ka dhigto waa inuu hirgalaa mushruucu wuxuuna bilaabmayey 2020. Waxaa laga bilaabayaa caruurta oo ubaahnaandonta hadii ay noqoto waxbarashada owgeed iyo dhakhtarka lagu gaynayo waxay dhamaantod ku xidhnaandoonan talaalka “digital certificate”.
Qorshahan ID2020 iyo siduu ushaqaynayo waxaa laga fuliyey Bangladesh waxaana lagu fuliyey bulshda qaybaheeda kala duwan caruur, dad waaweyn, dhalinyaro iyo dumar oo qolokastaba loo sameeyey jib lagu talaalay jidhkooda oo ku rakiban.
Waxaynu kusoo ururinaynaa inakoo ka duulayna qorsheyaasha dhagaraysan ee ururada hadafka muuqada iyo mid qarsoonba leh (dhakhatiirti fransiiska ahayd ee dibada jeenay in Afrika talaalka lagu bilaabo) ee doonaya inay kugu fushadaan hawlo iyaga uun khuseeya in laga digtoonado oo aan waxkasta oo laguula yimaado aanad dacalka qabsan. Waxaa jiraa shirkado macaash raadis ah oo intabadan qandaraasyadan waaweyn ee laga soo ansixiyey UN fuliya oo qaata dunida saamayn kuleh.
Hore ayey udhacday inay cudur hargabka aan waxbadan dhaamin oo difaaca jidhku ka adagyahay dunida loogu sheegay khatar cidhib tiraysa biniadamka oo ay xalkii iyo dawadiiba soo jeediyeen inay iyagu hayaan “TALAAL” oo billions doolar dunida lagukala macaashay, laakiinse gadaal kasoo baxaday in wuxuba mashruuc ahaa. Waxaa iska jirikara in mashruuc dawo tijaabin laguula yimaado ama ictiraaf baanu wadnaa hadii aad TAALKAN qaadataan laakiinse aan xaqiiqada ku salaysnayn laga feejignado oo aan qandaraas laga deyin. COVIG-19 dawo maleh ee cidii maarayn iyo dawo uhaysa ha iska soo bilaaban iyagu.